Ajụjụ / Ihe / Ozi / Eziokwu - Ụlọ ọrụ dị mma
Ònye ma obu ihe bu "ulo oru ihe oma"
Akụkọ anyị na-amalite ebe n'etiti etiti narị afọ nke 20 mgbe obere nwa nwoke si Hungary bịara Westhoek. Ya (nna nna m) chọpụtara n’oge na-adịghị anya na inwere ike imebi ịdị adị gị site n’ịmụta nka. Ọ mụtala ụzọ dị iche iche ma jiri ọrụ aka ya nwee ọ toụ na mmalite nke nwata. Jenö Hullak(†) site na mkpụrụ ndụ ihe nketa ya, o nyere anya maka nkọwa na ọ theụ nke arịa mara mma.
Agbanyeghi na amaghi m ya onwe m… enwere m ekele nye nna nna m maka nke a ma enwere m obi uto n’inwe onyonyo site na ‘igbe ochie’ ebe o no na aka ya.
N'okpuru aha 'The Good Stuff Factory' M (Joeri Hullak) na-erekarị oche oche Devid site na 50, 60, 70 na 80 tinyere ndị otu m. Oche oche retro dị n’ụlọ nkwakọba ihe anyị na Emblem (PC 2520) na mpaghara Antwerp. A na-egosipụta oche niile ebe ahụ, enwere ike ịtụtụkwa ebe ahụ.
Oche anyị na-enye ụlọ gị ma ọ bụ (HORECA) azụmaahịa ịchọrọ ị na-achọ kemgbe. Anyị ọkachamara na oche, mana mgbe ụfọdụ anyị na-agafe arịa ndị ọzọ mara mma, ihe ma ọ bụ ngwa ndị anyị enweghị ike ịhapụ ịhapụ.
Gaa na nhazi
Anyị na-achọ gị obi ụtọ ịnabata ụlọ nkwakọba ihe anyị na Emblem. Emblem (PC2520) dị nso na Lier (Klein Gent) ebe ị nwere ike ịgafe tupu ma ọ bụ na nleta gị na ngwaahịa anyị Bar Muza ma ọ bụ ihe atụ Nri na okooko osisi maka kọfị mara mma na ebe ị pụrụ ịhụ ka oche anyị na-eme ike ha niile n’ebe obibi ebumpụta ụwa ha. N'ihe banyere njem mmụta, Lier nwekwara ike ịgụta ya n'ihi na Toerisme Lier nwere oke njem nlegharị anya nke ukwuu.
Anyị enweghị oge mmeghe, ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ maka ụbọchị na oge (ikekwe na ụbọchị ọzọ), na-atụ anya na anyị nwere ike ịhazi ndokwa n'oge na-adịghị anya (na ngwụcha izu na n'ehihie ọtụtụ mgbe).
You ga-enweta nkọwa nkọwa nke okwu anyị mgbe ị na-atọrọ. Nkọwa adreesị anyị abụghị nke 'ọha', anyị na-eme iji gbochie gị iguzo n'ihu ọnụ ụzọ mechiri emechi na n'ihi na ebe anyị na-ebusa ebugharị dị n'agbata ahịhịa na ahịhịa, obere akwụkwọ ntuziaka dịkwa :-).
Ekwentị: + 32496033466
VAT nọmba: BE 0730.799.582
Anyị na-enye oche dị iche iche. Maka obere ọnụọgụ, anyị na-ebufe ngwugwu anyị na oche site na Bpost. Ha abụghị ọnụ ala mana ọrụ bụ nke kachasị mma. Kwee ka ụbọchị ise rụọ ọrụ iji gaa na nnyefe. Anyị na-eziga ngwungwu na oche na € 10 ma ọ bụ € 15 dabere na ibu. Mgbe anyị na-ebuga ngwugwu buru ibu, anyị na-eme nke a na pallet. Ọnụ ego maka izipu pallet n'ime Belgium dị ihe dị ka € 75 (karịa. 21% VAT) na mba ọzọ nọ na-arịọ. (Ihe atụ Paris = € 125 maka pallet nke oche 40). Ọ bụrụ na ịchọrọ ka anyị jiri bọs anyị na-ebuga oche ndị ahụ n'onwe anyị, anyị na-akwụ ụgwọ € 1 / km site na eburu anyị.
Soro anyị ọnụ ọchị site na iji #thegoodstufffactory ma ọ bụ tag @thegoodstufffactory. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmara banyere ihe ndị ọhụrụ a na-achọtara, gbasoro anyị Facebook.
Anyị hụrụ eziokwu n'anya banyere oche anyị. Obi dị anyị ụtọ ịgwa gị nke a mgbe ị gara. Anyị nwere ike ịnye gị ntakịrị ihe gbasara obodo anyị 'Kessel. Anyị bụ onye isi agha Star Wars (Gini bu aha).
Anyị na-atụ anya ịhụ gị na Emblem!
Joeri Hullak - onye njikwa azụmaahịa na-anụ ọkụ n'obi